Guddida Nabadgelyada Gobolka Hargeysa oo xukun ku riday Koox Dhalinyaro ah | Somaliland.Org
Guddida Nabadgelyada Gobolka Hargeysa oo xukun ku riday Koox Dhalinyaro ah
March 31, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddiga Nabadgelyada gobolka Hargeysa, ayaa xukun ku riday 15 dhalinyaro ah oo ay dhowaan Boolisku ka ururiyeen suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa.
Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Mr. Maxamed Saqadhi Dubad, ayaa sheegay in hawlgalka ay 15-ka qof ee guddiga Nabadgelyadu go’aanka ka soo saartay ay ka dambaysay cabasho ka timi bulshada wax ka iibsata suuqa ganacsiga ee Waaheen, taasoo la xidhiidha dhaqan-xumo hawlwadeenada meherada Bacadleyaashu kula kaceen dadka ka dukaamaysta suuqaas oo ah ka ugu mashquulka badan Hargeysa.
Taliyuhu waxa uu sheegay in cabashadaa u timi sababtay hawlgal Boolisku ku soo qabqabteen 15 qof oo uu tilmaamay in saddex ka mid ah la sii daayay, ka dib markii waxba lagu waayay.
Mr. Saqadhi waxa uu sheegay in guddiga Nabadgelyadu dadkaas midkiiba ku xukuntay ganaax lacageed oo dhan boqol kun (100,000) oo shilinka Somaliland ah. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in guddigu u qorsheeyeen inay dadkaas la xidhxidhay midkiiba ku xukumaan hal sanno oo xadhig ah, balse ay tixgeliyeen cabasho ay arrintaa ka muujiyeen ganacsatada suuqa Waaheen.
Taliyuhu waxa uu mulkiilayaasha Bacadlaha suuqa ka dalbaday inay hubiyaan cidda ay shaqaalaynayaan, wuxuuna ku hanjabay in ciidanka Boolisku sii wadayaan hawlgalkaas oo uu tilmaamay inuu noqon doono mid joogto ah.
Previous PostMasuuliyiin ka tirsan Xisbiga KULMIYE oo soo dhaweeyay Baaq ay soo saareen Qurba-joogga SaaxilNext PostWasiirka Waxbarashada oo lagu eedeeyay in uu iska dhego-tiray Dacwad ay u gudbisay Jaamacadda SUTECH	Blog